Mividiana mpanamboatra lafaoro varahina induction, lafaoro varahina miempo
Home / Induction Melting Furnace / Fitrandrahana famonoana menaka / Afangaro amin'ny lafaoro varahina amin'ny induction
Sokajy: Fitrandrahana famonoana menaka, Fandoroana fanalefahana amin'ny famokarana tavy, Induction Melting Furnace, Afo Fandoroana vy Tags: varahina varahina varahina, induction furnace, induction melting, induction fusion fio, varahina varahina, famonoana menaka varahina, famonoana menaka fanosorana varahina, fantsona metaly melting
Ny kalitaon'ny indostria avo lenta indraindray dia mampifangaro vongan-davenona mba handefasana vy, varahina, vy, volafotsy, volamena ary aluminium, sns.
Ny fampiasana hafanam-po hafanam-pandehan'ny indostrialy dia ampiasaina amin'ny fametrahana vy, vy, vy, varahina, varahina, volafotsy, volamena, ary aluminium, sns. Afaka manomboka ny 3KG ka hatramin'ny 500KG.
Ny firafitry ny fampidiran-drivotra ny MFM:
Ny fametrahana ny fitaovana dia ny mpamantatra ny faharetan'ny solosaina, ny fanonerana ny kapasitera sy ny fatana fandoroana, ny solosaina amin'ny hafanana hafanana ary ny fanaraha-maso ny mari-pana dia mety ho tafiditra ao an-tsainy ihany koa. Ny karazana varimbazaha telo dia azo averina arakaraka ny fomba fandotoana azy ireo, izy ireo dia afon-drivotra, fantsom-pofona ary toeram-ponenana ao amin'ny orinasa. Araka ny fomba fanodinana, dia misy karazana telo ny fizotran'ny famokarana fofona: famokarana horonantsary manasaraka, famokarana herinaratra fanindriana ary fandroana hydraulic tilting.
Ny endri-tsarin'ny MF Induction Copper melting machines:
Ny fametahana milina MF dia azo ampiasaina amin'ny famoahana ny vy, ny vy, ny varahina, ny alimineo, ny volamena, ny volafotsy ary ny sisa.
Noho ny fiantraikany mampihetsi-po vokatry ny herin'ny hery entona, dia mety hampihetsi-po ny dobo fivoahana mandritra ny diany mba hanamaivana ny fandosiran'ny rivotra sy ny oksidia mba hamokarana ampahany avo lenta.
Ny halavam-boly matetika avy amin'ny 1KHZ mankany 20KHZ, ny faharetan'ny asa dia azo amidy amin'ny fanovàna ny kodiarana ary ny fanonerana ny kapasitera arakaraka ny fitaovana fandefasana, ny habetsahana, ny faniriana ny faniriana, ny fiasàna miasa, ny fahombiazan'ny fandaniana ary ireo antony hafa.
Ny haavon'ny herinaratra dia 20% ambony noho ny milina mahazatra an'ny SCR;
Ny kely sy ny mazava, maro ny modely azo alaina handosirana metaly samihafa. Tsy vitan'ny hoe mety amin'ny orinasa ihany izy io, fa mety koa ho an'ny orinasam-pampianarana sy fikarohana.
Ny modely voalohany sy ny fahaiza-manaony:
Ny latabatra etsy ambany dia mirakitra ireo modely lehibe ary asiana fepetra faran'izay bitika. Ilaina ny 50 ka hatramin'ny 60 minitra mba hamaranana ny dingam-pikoranana amin'ny toerana mafana ao amin'ny lafaoro, raha mafana ny fitrandrahana, mila 20 hatramin'ny minitra 30 fotsiny.
Ny ampahany manan-danja ao amin'ny rafitra fandrakofam-bozaka famokarana varahina:
2. Afo Afo.